Facebook အဘို့အ Lite ကို Messenger ကို | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Lite ကို Messenger ကို
Lite ကို Messenger ကို APK ကို
တစ်ဦးကအခမဲ့, Lite သင် chat ခွင့်ပြုထားတဲ့ messenger ကို app ကိုခေါ်သင့်ဖေ့ဘုတ်ခ်သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုအား, အီမိုတီကွန်ကိုပို့, ဗီဒီယိုများ, ပုံများ, လက်ဆောင် Newsfeed ကို browse, မှတ်ချက်များစသည်တို့ကို ... နှင့်ဟုတ်ကဲ့, သိပ်လျော့နည်းခွင့်ပြုချက်။
★သင့်ရဲ့ဘက်ထရီနဲ့ memory Save ★
- Lite ကို Messenger ကို install လုပ်ပြီးနောက်ကို download လုပ်ပါနှင့်အကြမ်းဖျင်း 4MB သာ 30MB ကြာ
- Facebook ကိုဆာဗာနောက်ခံဆက်သွယ်မှု optimized ဖြစ်ပါတယ်
- ဤတမန် Lite 20MB RAM ထက်ပိုမကိုအသုံးပြုသည်
- Lite ကို Messenger ကို Messenger ကို layout ကိုတစ်ဦးရိုးရှင်းသောဗားရှင်းကိုအသုံးပြုသည်
★သင် privacy ကိုကာကွယ်ပါ★
- ဝင်မည်နှင့်အများပြည်သူပရိုဖိုင်းနှင့်အတူ Facebook အကောင့်ကိုသုံးပြီးချက်ချင်း chat (ကြှနျုပျတို့သညျဤမလိုအပ်ပါဘူးဒါပေမယ့် Facebook က default အနေဖြင့်ပေးထားသောရဲ့)
- ဤတမန် Lite သငျသညျကို Facebook ကနေဒေါင်းလုပ်လုပ်ပုံရိပ်တွေ send and receive စေခွင့်ပြုချက်သာလက်တဆုပ်စာလိုအပ်ပါတယ်
- သင့် Android ဗားရှင်းအကြာတွင်5ထက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်, ငါတို့သည်လည်းဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများအတွက်ခွင့်ပြုချက်ကိုရယူသုံးကင်မရာကိုတောင်းဆို
- နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအဘို့ဤစာမျက်နှာ၏အဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ privacy ကိုမူဝါဒအကြည့်ယူ ကျေးဇူးပြု.
- ထို2အရာရှိတဦးက apps များအဖြစ်အလားတူအသေးစားခြေရာ app ကိုလုပ်ဆောင်ချက်များကို။
- သင်ကမက်ဆေ့ခ်ျကိုလက်လွတ်ဘယ်တော့မှကြောင်းသေချာစေရန် Facebook ကိုမှသတိပေးချက်များကို Push
- Lite ကို Messenger ကိုအဟောင်းတွေကို Android ဗားရှင်းတွေနဲ့သဟဇာတဖြစ်
- Facebook ကိုထံမှပုံများ, download, ဗီဒီယိုများပေးပို့ပါ။
- Lite ကို Messenger ကိုအန်းဒရွိုက်5နောက်ပိုင်းတွင်ဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှင့်အသံဖြင့်ခေါ်ဆိုမှုခွင့်ပြုပါတယ်။
- ဖေါ်ညဥ့် mode ကို (အခြားအရောင် themes များမကြာမီကဆက်ပြောသည်ပါလိမ့်မည်)
ဤသည် Messenger ကို Lite ကိုတစ်ဦးကအခြားရွေးချယ်စရာတမန်ဖြစ်၏နှင့်မျှမတို့လမ်း, sponsored ထောက်ခံသို့မဟုတ်အုပ်ချုပ်အသုံးပြုပုံသို့မဟုတ်နဲ့ဆက်စပ် Facebook ကဖြစ်ပါတယ်။ "Facebook မှာ" Facebook မှာ, Inc ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပါသည်
သင်ကမကြိုက်ဘူးဆိုလျှင်,5ကြယ်ပွပေးပါနှင့်မှတ်ချက်များကိုစွန့်ခွာ, အစီရင်ခံစာ bug တွေသို့မဟုတ်ငါတို့အားတစုံတခုသော features တွေအကြံပြုအပ်ပါသည်။
Facebook ပေါ်မှာ Messenger ကို Lite ကိုလိုက်နာပါ: https://www.facebook.com/faceb0ok.messenger
Google Plus အပေါ် Messenger ကို Lite ကိုလိုက်နာပါ: https://plus.google.com/u/0/b/110300112096760431278
**** အသိပေးစာ ***
1.Newsfeed ကိုအပေါ်ရပ်တည်ချက်ကို Loosing: settings ကိုသွားပြီးအသစ်က tabs များအတွက်ပွင့်လင်း post ကိုစစ်ဆေး
2. ကြော်ငြာဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကိုသင်ကြော်ငြာတွေကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက် app ကို upgrade သို့မဟုတ်ဝေမျှနိုင်ပါတယ်😐ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြောင်အစာကျွေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
3: လွှတ်တင်ခြင်း, download, ပုံရိပ်, ဗီဒီယို, ဖိုင်တွေ, Settings ကိုသွားပါ -> ဇယား API ကိုအားဖြင့်အပ်လုဒ်ကို Enable ကိုရွေးပါ
ညာဘက်အံဆွဲအပေါ်အော့ဖ်လိုင်း / အွန်လိုင်း switch သည်။
Fixed download, ဓာတ်ပုံများ
Xiaomi ထုတ်ကုန်အပေါ် crashing fix ။
Change Icon, ပိုကောင်းညဥ့်မုဒ်။
Added ရွေးချယ်စရာမက်ဆေ့ခ်ျကို click သည့်အခါ
သငျသညျအားနည်းချက်များကိုသတင်းပို့ချင်ပါတယ်လျှင်တစ်ဦးစခရင်ပုံသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုတစ်ကားကို attach ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ။
Lite ကို Messenger ကို
4.63 ကို MB
App Hider Lite ကို
Shiva Kanya Ghimire says:
ဇန်နဝါရီလ 2, 2018 မှာ 7: 04 နံနက်